Waa maxay STIyada? | Zanzu
Cudurada galmada lagu kala qaado (STIs)
STIyadu waa cudurada lagu kala qaado xidhiidhka galmada ee qofka qaba STI Waxaa sidoo kale jira qaabab kale oo lagu qaado STI.
Waxaa jira STIyo badan. STIyada qaarkood waxaa sababa bakteeriya, kuwa kale waxaa sababa fayras ama dulin. Astaamaha ama qaababka kale kaas oo loo baadho ama loo daweeyo sidoo kale way kala duwanyihiin.
STIyada si kedis ah iskagama tagaan. U tag dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadkaaga degmadda (GGD) wixii ah daawaynta.
STIyada waxaa sababay bakteeriya.
Qaar ka mid ah STiyada waxaa sababa bakteeriya. Waxaa si fudud loogu daawayn karaaantibiyootiga:
STI fayrasku sababo
STI yada kale waxaa sababa fayras. Way ka adag yihiin ama suuragal maaha in la daweeyo. Int abadan keliya astaamaha ayaa la dawayn karaa:
cudurka fayraska herbas;
burrooyinka xubinta taranka.
STI ay sababaan dulin
STI yada qaarkood waxaa sababa dulin. STI yadan waxaa la isugu gudbiyaa xidhiidhka galmada ama maqaarka si fudud la isku taabsiiyo.
caabuqa kaadi mareenka tarikomoniyaysis; iyo
Kondhomka waxa uu ka ilaaliyaa adiga iyo lamaanahaaga HIV, kalamiidiyaha iyojabtida. Waxay yaraysaa khatarta ahcaabuqyada STI yada kale. Had iyo jeer si buuxda uma bogsiiso boogaha,gubashada maqaarka ama burooyinka ku yaala maqaarkaaga ama maqaarka lamaanahaaga. Tan macnaheedu waxa weeya in aad weli khatar ugu jirto cudurka wata STI. Tallaalada waxay ka hortaggi karaan qaar ka mid ah STIyada. Tusaale ahaan, cagaarshowga B.
Badanka STIyada waa la dawayn karaa. Waa la dawayn karaa ama astaamahoodu way qarsoomi karaan. STIyada waxay si halis ah u waxyeelayn karaan caafimaadkaaga haddii aad la dawayn. Sidoo kale waa qaad siin kartaa dadka kale.
Sida loo aqoonsado STI
STIyada inta badan ma laha astaamo cad. Had iyo jeer ma arki kartid haddii aad qabto STI. U tag dhakhtarkaaga guud, adeega caafimaadka dad waynaha ee degamda (GGD) ama xarunta caafimaadka xaga xarunta magan galya doonka haddii aad u malaynayso inaad qabto STI. Way ku baadhi karaan.
Caabuqa siilka waa caabuq ah siilka oo waxa uu leeyahay astaamo la mid ah STI. Maaha STI Inta badan kuma qaadid cudurka dhexda galmada.
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Waa maxay STIyada?
Sida loo isticmaalo kondhomka